Nagarik News - संविधान सभा 'हत्या'को साक्षी बनेको दिन
होमपेज / ब्लग / संविधान सभा 'हत्या'को साक्षी बनेको दिन
संविधान सभा 'हत्या'को साक्षी बनेको दिन	28 May 2013 मङ्गलबार १४ जेष्ठ, २०७०
वर्षाले बिथोल्यो बर्मुडामा नेपालको तयारी समाचारहरुसँग खेलिरहने भएकोले समाचारका विषयसँग खासै भावना जोडिएको हुन्न। तर जेठ १४ मध्यरातमा संविधानै जारी नभई संविधान सभा भंग भइसकेपछि अफिसको गाडीमा घर फर्कँदै गर्दा लागेको थियो- सबै ध्वस्त भयो। यत्रो दुःख गरेर पाएको उपलब्धि सबै गुम्ने भयो। देशको कहालिलाग्दो भविष्य सम्झेर अत्यास लागेको थियो। एकाबिहानैदेखि राति अबेरसम्म नागरिकन्युजमा निरन्तर अपडेट गर्दाको थकाइले हैन, अब के होला भन्ने चिन्ताले फतक्कै गलेको थिएँ।जेठ १४ को दिन बिहान निद्रा खुल्ने बित्तिकै थाहा थियो, प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको फैसलापछि संविधान घोषणा गर्न आज मध्यरातसम्मको समय छ- २४ घण्टाभन्दा पनि कम। ताजा समाचार पाउन नागरिकन्युजमा थाम्नै नसक्ने गरी पाठकहरुको ओइरो लागेको थियो। प्राविधिक साथीहरुलाई 'अलर्ट' गराउँदै थिएँ। बिहानैदेखि दलहरुको बैठक जारी थियो। आज राति अबेरसम्म बस्नुपर्छ भनेर मानसिक रुपमा नै हामी तयार थियौँ।घटनाक्रम यति तीव्र रुपमा विकसित हुँदै थियो कि लाइभ अपडेटको विकल्प थिएन। दिउँसो एक बजेतिर लाइभ अपडेट चालु गर्‍यौँ। ऋषिकेश दाहाल रेगुलर अपडेटमा थिए। कृष्ण ढुंगाना र म लाइभ अपडेटमा थियौँ। प्रधानमन्त्री निवास र त्यहाँ भइरहेका वार्ताहरुको मोर्चामा उजिर मगर डटेका थिए। संविधान सभा भवनभित्र र संसद सचिवालयमा भइरहेका वार्ताहरुको अपडेट माधव ढुङ्गेलले गराइरहेका थिए। मदन चौधरी संविधान सभा वरपरको मोर्चा सम्हालिरहेको थियो, जहाँ विभिन्न जातीय संघसंस्थाहरुको निरन्तर प्रदर्शन जारी थियो। केपी ढुंगाना सुरक्षाको विषयमा अपडेट गराउँदै थिए। गोविन्द परियार कांग्रेस बैठकको न्युज टिपाउँदै थिए। फोटो पत्रकार विकास कार्कीसमेत संसद भवनमा भएका नाराबाजीको समाचार टिपाउँदै थिए।समाचार अपडेट गराउने क्रममा बीचमा केही समय संविधान बन्ला नै जस्तो लागेको थियो हामीलाई। विशेष गरी जनजाति सभासदहरुको ककसको दलहरुसँगको वार्तापछि र मधेसी सभासदहरुलाई गरिएको ब्रिफिङपछि संविधान बन्ने आशा पलाएको थियो। १० प्रदेश र एक केन्द्र शासित प्रदेशमा सहमति हुन लागेको खबर आएका थिए।हजारौँ पाठक लाइभ अपडेटमा झुम्मिएका थिए। दिउँसो ३ बजेतिर तपाईँको विचारमा आजै संविधान बन्ला भन्ने प्रश्न राख्दा ४६ प्रतिशतले बन्छ भनेका थिए।तर सात बज्दानबज्दै माधव ढुङ्गेलले केपी ओलीको भनाई फोनमा टिपाए- अब संविधान नबन्ने भयो, विकल्पमा के गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्दैछौँ।कर्फ्यु लाग्ने हल्ला व्याप्त थियो। स्कूलहरु त बन्दै गरिएका थिए। जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले कर्फ्यु हैन, ५ बजेपछि मदिरा किन्न, बेच्न र पिउन नपाउने सूचना जारी गर्‍यो।संविधान नबन्ने भयो भन्ने सात बजेको आसपासमा नै प्रष्ट भइसके पनि आउँदो दिनमा के हुनेछ भन्ने थाहा पाउन चाहिँ मध्यरातमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै सम्बोधन आवश्यक भयो। उनले संविधान सभाको नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोकेछन्, जसको विरोध कांग्रेस-एमालेले गरे। अन्ततः त्यतिबेलादेखिको असहमति भट्टराईको बहिर्गमनपछि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार बन्दा बल्ल हट्यो। तर यही सरकारले पनि आज यी शब्द लेख्दासम्म निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकेको छैन।प्रधानमन्त्री भट्टराईको सम्बोधनपछि हामी न्युजरुममा राष्ट्रपति कार्यालयबाट आउने वक्तव्यको प्रतीक्षामा थियौँ। तर त्यो रात वक्तव्य आएन। के होला भन्ने अन्यौलका बीच नै हामी राति २ बजेतिर कार्यालयबाट घरतिर लागेका थियौँ।हेर्नुस्, त्यो दिनको लाइभ अपडेट-
&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href="http://www.coveritlive.com/mobile.php/option=com_mobile/task=viewaltcast/altcast_code=add610d372" mce_href="http://www.coveritlive.com/mobile.php/option=com_mobile/task=viewaltcast/altcast_code=add610d372" &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;संविधान सभाको अन्तिम दिन&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;
नमस्ते, संविधान जारी गर्ने निधार्रित समय केही घण्टा मात्र बाँकी रहँदा खबर प्रत्येक निमेषको दिन हामी उपस्थित भएका छौँ। 1:18
बालुवाटारमा भइरहेको ३ दल र मधेसी मोर्चाको बैठक भर्खरै सकिएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार सहभागी थिए।
३ दलीय बैठकपछि दलहरु आ-आफ्ना दलका छुट्टा छुट्टै बैठक गरिरहेका छन्।
संविधान सभाको आयु अब मात्र केही घण्टा बाँकी छ। दलहरु मध्य रातभित्र संविधान जारी गर्ने अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन्।
माओवादी र मधेसी मोर्चा पहिचान सहितको जातीय राज्य तथा कांग्रेस र एमाले बहु पहिचानको राज्य हुनुपर्ने अडानमा रहँदा दलहरुबीच कुरा मिल्न सकिरहेको छैन।
प्रधानमन्त्री निवासमा चलिरहेको वार्ताको रिपोर्टिङ गर्न पूर्वी गेटमा सयौं पत्रकारको भेला भएको त्यहाँ रहेका नागरिकन्युजकर्मी उजिर मगरले जनाएका छन्।
अनलाइन, पत्रिका, टेलिभिजन तथा रेडियोमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरु आ आफ्नो रिपोर्टिङ साधन बोकेर पूर्वी गेटमा भेला भएका हुन्।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख जयबहादुर चन्दले अहिलेसम्मको अवस्था सामान्य प्रकृतिको रहेको बताए। 'सामान्य धर्नामात्र भएका छन्' उनले भने 'अहिलेसम्म शान्ति सुरक्षाको अवस्था नर्मल छ।'
प्रहरीले संविधान सभा भवनलाई केन्द्रमा पारेर चारैतिरवाट घेरा हालेर बसेको छ। प्रहरीलाई सशस्त्र प्रहरीले समेत सहयोग गरिरहेको छ- एसएसपी जयबहादुर चन्द
उपत्यकाका पुल र नाकाहरुमा निगरानी बढाएको र एक सय ६२ वटा आकस्मिक चेकपोष्ट बनाएर चेकजाँच गरिएको छ- एसएसपी चन्द
संविधान भवनस्थल नयाँ वानेश्वरमा रहेका नागरिकन्युजकर्मी मदन चौधरीका अनुसार आज पनि आदिबासी जनजाति महासंघले घेराउ गरेर संविधानका लागि दवाब दिइरहेका छन्।
संविधानसभा भवनस्थलमा नयाँ वानेश्वर क्षेत्रमा बाक्लै सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ। पैदल यात्रुलाई समेत भवनको पेटीबाट हिँड्न दिइएको छैन।
संविधान भवनस्थलमा रहेका नागरिकन्युजकर्मी मदन चौधरीका अनुसार शान्तिनगर गेट नजिकै किराँत तथा थारु समुदायका संगठनले धर्ना दिइरहेका छन्। उनीहरुले पहिचान सहितको जातीय राज्य माग गर्दै नाराबाजी गरिरहेका छन्।
बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको संविधानसभाको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन। संविधानका विवादित विषयमा दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा बैठक बस्न ढिलाइ भइरहेको हो।
प्रधानमन्त्री निवासमा रहेका नागरिकन्युजकर्मी उजिर मगरका अनुसार ३ दलको बैठकस्थलमा जनजाति नेताहरु प्रवेश गरेका छन्।
नागरिकन्युजकर्मी उजिर मगरका अनुसार बैठक गरिरहेका ३ दलका नेताहरुले खानाका लागि विश्राम लिएका छन्।
भर्खरै एमाले नेता छविलाल विश्वकर्मा बैठकस्थलमा प्रवेश गरेका छन्।
संविधान जारी गर्ने दिन विभिन्न समूहबाट हुनसक्ने अवरोधलाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौँका सम्पूर्ण निजी विद्यालय आज बन्द गरिएका छन्http://www.nagariknews.com/society/nation/41273-2012-05-27-06-22-06.html
वर्षमान पुन सहित जनजाति सभासदहरुको समुह ककसका नेताहरु प्रधानमन्त्री निवास प्रवेश गरेका छन्। संविधानमा सहमति जुटाउन उनीहरुसँग सहमति जुटाउन बोलाइएको हुन सक्ने प्रधानमन्त्री निवासमा रहेका उजिर मगरले जनाएका छन्।
Comment From Ananda Lamichhane well ! this is very sincere journalism work of nagarik news group thanks so much.
संविधानसभाको पश्चिम गेटमा नाबाजी गरिरहेका प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच सामान्य झडप भएको छ।
शान्तिनगरमा जनजाति संगठनहरुले सांस्कृतिक भेषभुषामा नाचगान गरिरहेका छन्।
संविधानसभाको दक्षिण पूर्वी कुनो ट्रली बस अगाडिपट्टि लिम्बु, किराँत र तामाङको संयुक्त धर्ना कार्यक्रम चलिरहेको छ।
तराइ मधेस हिमाल पहाड पार्टीका कार्यकर्तासँग पश्चिम गेटमा सुरक्षाकर्मीसँग सामान्य झडप भएको हो। सुरक्षाकर्मीले अहिले स्थिति सामान्य छ।
संविधानसभाको पश्चिम उत्तर कुनोमा क्षत्री,बाहुनहरुले जातीय संविधानको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरुलाई प्रहरीले अगाडि बढ्नबाट रोकेको छ। स्थिति सामान्य रहेको नागरिकन्युजकर्मी मदन चौधरीले जनाएका छन्।
३ दलको वार्ता भइरहेको प्रधानमन्त्री निवासमा रहेको नागरिकन्युजकर्मी उजिर मगरका अनुसार मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बैठकस्थल प्रवेश गरेका छन्। कांग्रेस सरकारमा गएपछि उनी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भएका थिए।
कर्फ्युको सम्भावना नरहेको प्रहरीको भनाइ। अब के हुने हो भन्ने हल्लाले सर्वसाधारण आतंकित देखिए पनि राजधानीको जनजीवन सामान्य छ। काठमाडौंको सुरक्षा कमान्डपोष्टमा रहेका एसएसपी जयबहादुर चन्द भन्छन्- 'अहिलेसम्मको अवस्था सामान्य प्रकृतिको छ। सामान्य धर्नामात्र भइरहेका छन्। पुल र नाकाहरुमा निगरानी बढाइएको छ।'
संविधान बन्ने कि नबन्ने भन्ने अन्यौल अझै छाइरहँदा नेपाल स्टक एक्सेन्जमा भने नेप्से इन्डेक्स अत्यधिक बढेपछि सर्किट ब्रेकर लाउनु परेको छ। नेप्से ४ प्रतिशतले बढेपछि कारोबार ३० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको हो।
वैद्य पक्ष रणनीति तयार पार्दै। संविधान जारी गर्न केही घण्टा जारी रहेका बेला अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे रणनीति तय गर्न एकीकृत नेकपा (माओवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्षीय नेताहरुको छुट्टै बैठक गरेका छन्। उनीहरुले बुद्धनगरस्थित जनवर्गीय सङ्गठनको कार्यालया बैठक गरिरहेको राष्ट्रिय समाचार समितिले जनाएको छ।
नेप्सेको कारोबार १ बजेर ५५ मिनेट जाँदा सर्किट ब्रेकर लागेको थियो। ३० मिनेट बन्द गरिएपछि अब कारोबार सुरु भइसकेको छ।
संविधानसभा भवनलाई केन्द्रमा पारेर विभिन्न जातीय संगठनले धर्ना दिइरहे पनि उनीहरु संयमित देखिएका छन्। सरकारले तोकेको निषेधित क्षेत्र वरै बसेर उनीहरुले प्रदर्शन गरिरहेको त्यहाँ रहेका नागरिकन्युजकर्मी मदन चौधरीले जनाएका छन्।
संविधानसभा बैठक निर्धारित समयभन्दा झन्डै ४ घण्टा ढिला हुँदा पनि बस्न नसकेको भन्दै नयाँ वानेश्वर परिसरमा सभासदहरु नाराबाजी गर्न थालेका छन्।
संविधान सभा बैठक आजका लागि ११ बजे बोलाइएको थियो। अहिले ३ बज्न लागिसक्दा पनि बैठकको अत्तोपत्तो छैन। यसकै विरोधमा सभासदहरुले नाराबाजीमा उत्रिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री निवास बलुवाटारमा भइरहेको ३ दल बैठकमा सहभागी एमाले वरिष्ठ नेता केपी ओली बाहिर निस्केका छन्। गाडीबाट हात हल्लाउँदै अभिवादन गरे पनि उनले पत्रकारलाई भइरहेको वार्ता बारे कुनै जानकारी नदिएको त्यहाँ रहेका नागरिकन्युजकर्मी उजिर मगरले जनाएका छन्।
दिउसोको खानाका लागि केही समय स्थगित ३ दल र मधेसी मोर्चा सहितको वार्ता प्रधानमन्त्री निवासमा फेरि सुरु हुन लागेको छ। खाना खाएर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बैठकस्थलतर्फ लागेका छन्।
बिहानैदेखि वार्ताको रिपोर्टिङमा खटिएका सयौं सञ्चारकर्मी प्रधानमन्त्री निवासको पूर्वी गेट नजिकै संविधानमा कतिबेला सहमति बन्ला वा के निर्णय होला भनेर पर्खिरहेका छन्। त्यहाँ रहेका नागरिकन्युजकर्मी उजिर मगरका अनुसार ठूला मिडिया हाउसबाट ४ जनासम्म रिपोर्टर त्यहाँ खटिएका छन्।
संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने म्याद अब नौ घण्टा मात्रै बाँकी छ। संविधान सभाको बैठक भने अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन।
तपाईँको विचारमा आजै संविधान बन्ला?बन्छ ( 46% )बन्दैन ( 37% )अझै भन्न सकिन्न ( 17% )
केही समय अघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी स्थायी समिति बैठकले राज्य पुनः संरचनाका विषयमा लचिलो हुने निर्णय लिएको छ।
जातीय पहिचानको पक्षमा आएको माओवादी लचिलो हुने निर्णयले संविधानमा सहमति जुट्ने संकेत गरेको छ। कांग्रेस-एमाले बहुपहिचानको पक्षमा र माओवादी-मधेसी मोर्चा एकल जातिय पहिचानको पक्षमा रहँदै आएका थिए।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका सहयोगी शिव खकुरेलले दिएको जानकारी अनुसार बैठकले राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा आजै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। यसले संविधानमा सहमति हुनसक्ने संकेत मिलेको छ।
मधेसो जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ३ दलको वार्ता भइरहेको स्थल प्रधानमन्त्री निवासबाट निस्केका छन्।
बैठकबाट बाहिरिएका यादवले संविधान बन्ने संकेत नदेखेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
'संविधान बन्ने सकारात्मक धारणा पाइनँ। पहिचान बिनाको संघीयताका लागि कांग्रेस-एमालेले दवाब दिए भन्ने कुरा माओवादीले गरे। मधेसलाई खण्डिकृत गर्ने कुराहरु आएको छ। त्यो मधेशलाई मान्य हुन्न', उपेन्द्र यादवले भने।
संविधानमा सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भइरहेको वार्तास्थलमा संविधानसभाको महिला ककसका सदस्यहरु प्रवेश गरेका छन्।
भर्खरै यहाँ गरिएको अनलाइन मत सर्वेक्षणमा संविधान बन्छ भन्नेमा आशावादी पाठकहरु धेरै देखिए। ४६ प्रतिशतले संविधान आजै बन्छ भनेका थिए।
गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान लेखनकाका लागि राज्यले ९ अर्ब रुपैयाँ खर्चेको छ। आज संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी नगरे सो रकम बालुवामा पानी हुनेछ।
संविधानसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। सभासदहरुको तलब भत्तामा राज्यले ३ अर्ब लगानी गरेको छ।
संविधान सभा नियमावलीमा यस्तो छ- पारित संविधानको प्रमाणिकरण प्रति तयार गरी सदस्यहरुले हस्ताक्षर गर्ने, अध्यक्षले प्रमाणिकरण गर्ने र संविधानसभाले औपचारिक राष्ट्रिय समारोहको आयोजना गरी अध्यक्षले पारित संविधान राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेर राष्ट्रपतिले सोही समारोहबाट नेपाली जनता समक्ष संविधान सार्वजनिक गरी संविधान लागू भएको घोषणा गर्ने प्रावधान छ। अन्तिम अवस्थामा सहमति भए संविधान जारी गर्न अब नियमावलीका केही धारा संशोधन गर्नुपर्नेछ। 3:32
आदिबासी जनजातिले मीन भवनमा गरेको प्रदर्शन। तस्विरः चन्द्र काफ्ले
संविधान सभा नजिकको निषेधित क्षेत्र। तस्बिरः मदन चौधरी
संविधानसभा परिसरमा पक्ष र विपक्षको धर्ना संविधान जारी गर्ने समय केही घन्टामात्रै बाँकी रहँदा संविधानसभा भवन परिसरमा भने जातीयताका विषयमा पक्ष र विपक्षमा आवाज उठाउनेहरुको सहभागिता वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। सङ्घीयतासहितको संविधान जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै विभिन्न राजनीतिक दल र सङ्घसंस्थाले संविधानसभा भवन घेराउ गर्दैगर्दा राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय सद्भाव संयुक्त सङ्घर्ष समितिले कुनैपनि हालतमा मुलुकलाई जातीयताका आधारमा सङ्घीयता लाद्न नहुने भन्दै प्रदर्शन गरिरहेको छ।
नयाँ बानेश्वरको निषेधित क्षेत्र। तस्बिरः मदन चौधरी
संविधान सभा भवनबाहिर प्रदर्शन गरिरहेका आदिवासी जनजाति। तस्बिरः मदन चौधरी
तालिमप्राप्त कुकुरहरुसहित प्रहरी बानेश्वर क्षेत्रमा खटिएका छन्। तस्बिरः मदन चौधरी
काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले आज साँझ ५ बजेदेखि मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउन सूचना जारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री निवासमा भइरहेको वार्ताबाट जनजाति ककसका नेताहरु बाहिरिएका छन्। उनीहरुले १० देखि १४ प्रदेशसम्ममा सहमति हुनसक्ने बताए। 'पहिचान सहित १० वा १४ प्रदेशमा सहमति हुने संकेत देखिएको छ। राज्य पुनः संरचना आयोगले दिएको सिफारिशलाई आधार मान्ने भन्ने कुरा भएको छ। ४ दल यसमा सकारात्मक छन्', ककस सदस्य छिपछिरङ लामाले संवाददाताहरुसँग भने।
बैठकस्थलबाट बाहिरिएका माओवादी नेता लोकेन्द्र विष्टले संविधान आउनेमा आफू आशावादी रहेको बताउँदै बैठक संविधानसभास्थल नयाँ वानेश्वरमा सार्ने कुराकानी भइरहेको जानकारी दिए।
संविधानमा सहमति हुन लागेको संकेत मिलेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा रहेका नागरिकन्युजकर्मी उजिर मगरका अनुसार १० प्रदेश र १ केन्द्र शासित प्रदेशमा दलहरु सहमति नजिक पुगेका छन्।'माओवादी स्रोतका अनुसार यस्तो जानकारी आएको छ। लोकेन्द्र विष्टले पनि अब संविधानसभा भवन जान लागेको बताएका थिए', उनले भने।
संविधानमा सहमति जुटाउन भइरहेको वार्तास्थलबाट जनजाति ककसका संयोजक पृथ्वी सुब्बा गुरुङ बाहिरिएका छन्।
संविधानसभाको आयु ८ घण्टा बाँकी। ११ बजे बस्ने भनेको संविधानसभा बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन। केही अघि बैठक माग गर्दै सभासदहरुले संविधान सभा भवन नयाँ वानेश्वरमा जुलुश निकालेका छन्। उनीहरुले कोणसभा गरी आफूहरुलाई 'भेंडाबाख्रासरह' बनाइएको भन्दै शीर्ष नेताको आलोचना गरेका छन् ।
नाराबाजी गर्ने सभासदहरुमा सभासद् राजकाजी महर्जन, सभासद्हरु अलाउद्दीन अन्सारी, इन्द्रजीत राई थिए।
केही समयअघि वार्तास्थलबाट बाहिरिएका एमाले नेता केपी शर्मा ओली फेरि फर्किएका छन्। यस पटक पनि उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।
आपतकालीन स्थितिका लागि हामी पनि तयार छौँ। तस्बिरः मदन चौधरी
४६ सञ्चारकर्मी लाइभ गर्दै। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको भित्री भागबाट अनलाइन, रेडियो, टिभीका ४६ जना सञ्चारकर्मीले लाइभ अपडेट गराइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुरक्षा स्रोतका अनुसार अरु सञ्चारकर्मी गेट बाहिर बसेका छन्।
मीनभवनमा प्रदर्शनकारीले राखेको प्लेकार्ड। तस्बिरः मदन चौधरी
संविधानसभा भवनको ताजा भिडियो। संविधान जारी हुन केही घण्टा बाँकी रहँदा संविधानसभा भवन नयाँ व
अब संविधान जारी गर्न साढे सात घण्टामात्रै समय बाँकी छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसिरहेका नेताहरु बैठकस्थलबाट बाहिरिएका छन्। बालुवाटारबाट निस्केका नेताहरु अब सिंहदरबार जानेछन्। सिंहदरबारमा संवैधानिक समिति अन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिमा निर्णायक छलफल हुने त्यहाँ रहेका नागरिकन्युजकर्मी उजिर मगरले जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आजै राजीनामा देलान्?दिन्छन् ( 24% )दिँदैनन् ( 72% )थाहा भएन ( 4% )
जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले अहिले ५ बजेपछि मदिरा किन्न बेच्न र सेवन गर्न अर्को आदेश नभएसम्मका लागि रोक लगाएको छ। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी जयबहादुर चन्दले नागरिकन्युजसित कुरा गर्दै अहिलेसम्मको स्थिति सन्तोषजनक अवस्थामा रहेकोले कर्फ्यु लाग्ने त्रासमा नपर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेका छन्।
नागरिकन्युजकर्मी उजिर मगरका अनुसार शीर्ष नेताहरु अहिले सिंहदरबारमा छन्। संवैधानिक समितिको विवाद समाधान उपसमितिको बैठक अहिले भइरहेको छ। यसअघि बालुवाटारमा रहेका सबै सञ्चारकर्मी अहिले सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालय भवनमा केन्द्रित भएका छन्।
साँझको ५ बजेको छ। संविधान जारी गर्ने म्याद अब ७ घण्टा मात्र बाँकी छ। काठमाडौँमा मदिराजन्य पदार्थ बेच्न, किन्न र सेवन गर्न अर्को सूचना नभएसम्मका लागि रोक लागेको छ।
जनजाति सभासदहरुको ककससँग प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाको केही समयअघि बालुवाटारमा भएको सहमतिपछि मध्यरातसम्म भए पनि संविधान जारी हुने संभावना बढेको छ। ककसले हालसम्म एकल पहिचानमा जानु पर्ने अडान राख्दै आएका थिए। तर वार्तामा ककसले लचकता देखाएपछि संविधान आउने संभावना बढेको हो। अहिले शीर्ष नेतासहित सभामुख सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा सहमतिका लागि छलफल गर्दैछन्।
सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा मधेसी मोर्चाका नेताहरु अलग्गै बैठक बसेका छन्। प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता र सभामुखको बैठक जारी रहेको नागरिकन्युजकर्मी उजिर मगरले जनाए।
संविधानका विषयमा माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले भने- आज राति १२ बजेसम्म जनताको संविधान बनाउने प्रयास हुन्छ। अब संविधानसभालाई बचाउने उपाय छैन।
बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको संविधानसभाको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन। अब संविधान सभाको आयु मात्र ६ घण्टा २० मिनेट बाँकी छ।
तीन दलका शीर्ष नेताहरु सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षबाट बाहिरिएका छन्। उनीहरु अब छुट्टाछुट्टै आन्तरिक बैठकमा लागेको नागरिकन्युजकर्मी उजिर मगरले बताए।
नेप्से उकालो लाग्यो, १० करोड ७३ लाखको कारोबारराजनीतिक सहमति जुटने विश्वासमा आज सेयर बजार परिसूचक नेप्से दोहोरो अंकले बढेको छ। नेप्से १४ अंकले बढेर ४ सय १२ मा पुग्यो। खरिद कर्ता बढेपछि नेप्से बढेको हो। चार प्रतिशतले बजार बढेपछि सर्किट ब्रेकर लागेर आधा घन्टा कारोवार पनि रोकियो। 'सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि दलहरुले अन्तिम समयमा सहमति गरि संविधान जारी गर्छन भन्ने विश्वास साधारण लगानीकर्तामा देखिएकोले बजार बढेको हो' स्टक ब्रोकर एशोसियशनका अध्यक्ष अन्जनराज पौडेलले नागरिकन्युजसँग भने। एकै दिन सेयर बजारमा १० करोड ७३ लाखको सेयर किनवेच भएको छ। बढ्दो सेयर कारोवारले पनि बजार उकालो तर्फ लाग्ने देखाएको छ।
सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयको सभामुखको कक्षमा कङ्ग्रेसको, उपसभामुखको कक्षमा माओवादीको र आफ्नै संसदीय दलको कार्यालयमा एमालेको आन्तरिक बैठक बसिरहेको नागरिकन्युजकर्मी उजिर मगरले बताए।
चउरमा बरालिएर समय काट्दैछन् सभासदहरु। संविधानसभा भवनस्थलमा रहेका नागरिकन्युजकर्मी माधव ढुङ्गेलका अनुसार संविधानसभा बैठकका लागि आएका सभासदहरु चउरमा बरालिएर समय काटिरहेका छन्। अब के हुन्छ ? र शीर्ष नेताहरुको बैठकमा के भइरहेछ भन्ने कुरामा समेत उनीहरु अपडेटेड छैनन्।
बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको संविधानसभा बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन। नयाँ संविधानमा माओवादी-मधेसी र कांग्रेस-एमालेबीच सहमति जुट्न नसक्दा संविधानसभा बैठक बस्न ढिलाइ भइरहेको हो।
नयाँ बानेश्वरमा ब्राह्मण क्षेत्रीले गरेको प्रदर्शन। तस्बिरः भास्वर ओझा
केही अघि बालुवाटारमा वार्तापछि बोल्दै लोकेन्द्र विष्टले संविधान आउने ९५ प्रतिशत संभावना र��
सहमतिका लागि कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी मोर्चा तथा सभामुखबीच सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा वार्ता जारी छ।
पूर्वी तराईका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिममा कैलाली र कञ्चनपुरलाई कुन प्रदेशमा राख्‍ने विषयमा जनमत संग्रह गरी निर्णय गर्न कङ्ग्रेसले राखेको प्रस्तावमा मधेसी मोर्चा सकारात्मक भएको छ। फोरम लोकतान्त्रिकको संसदीय दलको कार्यालयमा तमलोपा सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनारले अहिलेसम्म भएका वार्ताबारे मोर्चाका सभासदहरुलाई ब्रिफिङ गर्ने क्रममा यस्तो बताएको नागरिकन्युजकर्मी माधव ढुङ्गेलले बताए।
संविधानसभा परिसरमा नारा लगाउँदै सभासदहरु। उनीहरुले आफूलाई शीर्ष नेताले भेडाबाख्रा बनाएको ��
जातीय संघीयताको विरोधमा बाहुन क्षेत्रीले संविधानसभा भवन पश्चिम-उत्तर गेटमा निकालेको जुलुस��
यसअघि जनजाति सभासदहरुको ककस पनि अहिलेसम्मका उपलब्धिलाई जोगाएर अघि बढ्न लचकता अपनाउन चार शक्तिको वार्तामा सहमत भइसकेका छन्। मधेसी मोर्चा र जनजाति ककस लचक भएपछि संविधान जारी हुने सम्भावना बलियो भएको छ।
संविधानसभास्थल नयाँ वानेश्वरको ताजा भिडियो हेर्नोस्।
नागरिकन्युजकर्मी माधव ढुङ्गेलका अनुसार एमाले नेता केपी ओलीले भर्खरै सिंहदरबारमा भने- अब संविधान नबन्ने भयो। सहमति मै केही विकल्प खोज्ने बारे छलफल भइरहेको छ।
जातीय राज्यको पक्षमा संविधानसभा भवन अगाडि प्रदर्शन गर्दै। तस्विरः विजय राई
सुरक्षा रणनीति बनाउँदै प्रहरी। महानगरीय प्रहरीय आयुक्तको कार्यालयमा उपत्यकाको सुरक्षासम्बन्धी बैठक सुरु भएको नागरिकन्युजकर्मी केपी ढुंगानाले जनाएका छन्।
सिंहदरबारको वार्ता स्थलमा रहेका नागरिकन्युजकर्मी माधव ढुङ्गेलका अनुसार माओवादी नेता पोस्टबहादुर बोगटीले सञ्चारकर्मीहरुलाई भने- १२ बजेसम्म संविधान आउन नसक्ने भएकोले विकल्पका बारेमा छलफल सुरु भएको छ। माओवादीले जे विकल्प ल्याए पनि कङ्ग्रेस र एमालेले नमान्ने भएकोले उनीहरुबाट जे विकल्प प्रस्ताव हुन्छ, त्यसैमा वार्ता हुनेछ। हामीले सिंहदरबारमा नभई बानेश्वर मै गएर बसौँ भन्दा पनि वार्ताका लागि बैठक बस्न बानेश्वर जान समेत उनीहरु राजी भएनन्।
संविधानसभा भवन नजिकै नयाँ वानेश्वरमा ब्राह्मण क्षेत्री प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ। प्रहरीले लाठीचार्ज र अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ। झडपमा केही प्रहरी र केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्।
झडपमा प्रहरीका डिएसपी सिद्धिविक्रम शाह घाइते भएका छन्।
उनलाई उपचारका लागि नयाँ वानेश्वरको एभरेष्ट नर्सिङ होम भर्ना गरिएको छ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी नहुने पक्का। सिंहदरबार भर्खरै फर्किएका नागरिकन्युजकर्मी गोविन्द परियाले संविधानसभा भंग हुने निश्चित भइसकेको उल्लेख गरेका छन्। दलका नेताहरु अहिले ३ विकल्पमा केन्द्रित भएर वार्ता गरिरहेका छन्। अब हुने विकल्पहरु (१) संविधानसभाको सबै काम रुपान्तरित संसदलाई जिम्मा लगाउने। (२) संकटकाल लगाएर ६ महिना संविधानसभाको म्याद थप्ने। (३) संविधानसभाको ताजा चुनावमा जाने।
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सहमति नजुटेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बस्न लागेको छ।
संविधानसभा भवनभित्र सभासद नाराबाजी गर्दै। बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको संविधानसभा बैठक बस्न नसकेपछि त्यहाँ रहेका सभासदहरु नाराबाजी गर्न थालेका छन्। उनीहरुले संविधान जारी गर्न माग गर्दै नारा लाइरहेका छन्।
नागरिकन्युजकर्मी विकास कार्कीका अनुसार संविधान सभा हलबाहिर सभासदहरु आक्रोशित भई नाराबाजी गरिरहेका छन्। सभासदहरुले ६०१ लाई ४ जनाले बन्दी बनाउन नपाइने, संविधान जारी गर्नुपर्ने लगायत नेताहरु फाँसी दिनुपर्ने जस्ता चर्का नारा समेत लगाइरहेका छन्।
वार्ताको नाउँमा समय बिताउँदै शीर्ष नेताहरुः गगन थापाराजनीतिक सहमतिका लागि सिंहदरबारमा भइरहेको वार्ताबाट बाहिरिएका कांग्रेस सभासद गगन थापाले माओवादीले संविधानसभाको आयु रहेसम्म वार्ता लम्ब्याउने र कुनै निष्कर्षमा नपुग्ने खेल खेलिरहेको आरोप लगाएका छन्। 'भर्खरै प्रधानमन्त्रीले १० प्रदेशको प्रस्ताव गर्नु भएको छ। यो समय कटाउन चालिएको चाल मात्रै हो', गगनलाई उदृत गर्दै वार्तास्थलबाट नागरिकन्युजकर्मी माधव ढुङ्गेलले जनाएका छन्।
केही समयअघि नयाँ बानेश्वर संविधान सभा भवन नजिकै भएको झडपमा १३ जना प्रदर्शनकारी र डीएसपी सिद्धिविक्रम शाहसहित ५ जना प्रहरी घाइते भएका छन्। नागरिकन्युजकर्मी केपी ढुंगानाका अनुसार ब्राह्मण क्षेत्रीको जुलुसले निषेधित घेरा तोड्न खोजेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरी ६ सेल अश्रुग्यास प्रयोग गरी स्थिति नियन्त्रणमा लिएको थियो। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख जयबहादुर चन्दका अनुसार अहिले स्थिति प्रहरीको नियन्त्रणमा छ। झडपपछि घेराउ र विरोध प्रदर्शनमा जम्मा भएका प्रदर्शनकारीहरुलाई निषेधित क्षेत्रबाट टाढा धकेलेको छ। एसएसपी चन्दका अनुसार अहिलेसम्म कर्फ्युको कुनै तयारी गरिएको छैन।
माओवादी प्रवक्ता तथा मन्त्री दीनानाथ शर्माले सरकारले सङ्कटकालको विषयमा केही नसोचेको बताएका छन्। सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले जनतालाई त्रसित बनाउन सङ्कटकालको हल्ला चलाइएको बताए। उनले भने- 'सरकारले अलग्गै केही तयारी गरेको छैन, सहमतिबाटै अगाडि बढ्नेछ।'
नागरिकन्युजकर्मी माधव ढुङ्गेल भन्छन्- अर्को चुनावको तिथि तोक्ने बारे दलहरु सहमति नजिक पुगेका छन्। सिंहदरबारमा भइरहेको दलहरुको वार्तामा कात्तिक २३ गते चुनावको तिथि तोक्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको त्यहाँबाट निस्केका सभासदले बताएका छन्।
केही बेरमा सरकारले पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ चुनावको तिथि घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतलाई उद्‍धृत गर्दै नागरिकन्युजकर्मी माधव ढुङ्गेलले जनाएका छन्।
संकटकाल लगाउने विकल्पबारे दलहरुबीच भएको छलफलमा कङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा सहमत भए पनि अर्का नेता रामचन्द्र पौडेल असहमत भएको र उनको अडानमा एमालेले पनि साथ दिएको बैठक स्थलमा रहेका एक सभासदले बताएको नागरिकन्युजकर्मी माधव ढुङ्गेल बताउँछन्।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अब कुनै पनि हालतमा संविधान बन्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। 'अब रुपान्तरित संसद वा संकटकाल लगाएर संविधानसभालाई जोगाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल गर्न हामी स्थायी समितिको बैठक गर्न लागेका छौं,' ३ दल र मधेसी मोर्चाको बैठकबाट बाहिरिएका अध्यक्ष दाहालले भने। स्थायी समिति बैठक माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा सुरु हुन लागेको त्यहाँ रहेका नागरिकन्युजकर्मी माधव ढुङ्गेलले जनाएका छन्।
नेपाल टेलिभिजनको लाइभ युनिट प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सामानहरु ओसार्दै छ। त्यहाँ रहेका नागरिकन्युजकर्मी उजिर मगरले सकारात्मक वा नकारात्मक जे भए पनि नयाँ परिस्थिति बारे प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने बताएका छन्।
नागरिकन्युजकर्मी उजिर मगरका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कङ्ग्रेस नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, रामशरण महत, मिनेन्द्र रिजाल र एमाले नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल पुगेका छन्। माओवादी आफ्नो स्थायी समितिको बैठक सकिएपछि त्यहाँ आइपुग्नेछन् र बाँकी दुई विकल्पमध्ये केमा जाने भन्ने विषयमा सहमतिको प्रयास गर्नेछन्।
नागरिकन्युजकर्मी उजिर मगरका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल निस्किएका छन्। सञ्चारकर्मीहरुले के भइरहेको छ भनी जानकारी माग्दा पौडेल 'केही छैन' भन्दै झर्किएर निस्किए।
संविधानमा संकटकाल बारे के छ ?धारा १४३. सकटकालीन अधिकार : (१) नपाल राज्यको सार्वभौ मसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्र ङृ खलताका कारणलेगम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा नपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले नेपाल राज्यभर वा कुनै खास क्षत्रमा लागू हुने गरी सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्नसक्ने छ। 10:36
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मंसिर ७ गते चुनावका लागि प्रस्ताव गरे पछि त्यसमा असहमति जनाउँदै एमालेका ईश्वर पोखरेल र राप्रपाका मन्त्री परशुराम खापुङङ त्यसको विरोध गर्दै बैठकबाट बाहिरिएका छन्।
भर्खरै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंसिर ७ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री एकनाथ ढकालले बताए। उनले एमालेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र राप्रपाका मन्त्री परशुराम खापुङले बैठक बहिस्कार गरेको पनि जानकारी दिएको सिंहदरबारबाट नागरिकन्युजकर्मी माधव ढुङ्गेलले जनाए।
राति ११४५ बजे प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दैछन्।
७ मंसिरमा चुनाव गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय लिएर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई राष्ट्रपति भेट्न शितल निवासतर्फ लागेका छन्।
कङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरु पनि राष्ट्रपति भवन पुगेका छन्। पौने १२ बजे हुने भनिएको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन हुन सकेन।
मध्यरात १२ बज्यो। संविधानसभा भंग।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई राष्ट्रका नाउँमा सम्बोधन गर्दैछन्।
सहमति पनि नगर्ने र प्रक्रियामा पनि नजाने पुराना शक्तिहरुले संविधान बन्न सकेन। त्यसैले मैले दुःख साथ भन्नुपर्छ ९ महिना अघि म प्रधानमन्त्री भएपछि संविधानका काम गर्‍यौं। चैत २९ गते हामीले सेना समायोजन गर्ने काम गर्‍यौं।
बाबुराम भट्टराई राष्ट्रका नाउँमा सम्बोधन गर्दै।
हामी हरेश खानु हुन्न। हाम्रो देश एउटा विविधताले भरिएको मधेसदेखि मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको यसको भविष्य उज्जवल छ। यति बेला हामी केही चिन्तित बनेका छौं।
हामीले यी असफलताबाट पाठ सिकेर अघि बढौं। यस पटक संविधान बन्न नसके पनि मंसिर ७ गते संविधान सभाको चुनावमा जाने निर्णय भएको छ। को संघीयताको पक्षधर हो को हैन भन्ने कुरा त्यहाँ देखिनेछ।
आम जनतामा निरास नबनी कन लोकतन्त्र र गणतन्त्र संस्थागत गर्न अघि बढ्न आग्रह गर्दछु।
चुनाव सिफारिशको राष्ट्रपतिलाई औपचारिक जानकारी मात्र गराएर आएका छौं।
राष्ट्रपतिज्यु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार जानेमा विश्वास गर्छौँ- प्रधानमन्त्री भट्टराई
संघीयताका पक्षधरको उपस्थिति कम भएकोले संविधान बनेन- प्रम भट्टराई
विघटित संविधान सभाका सभामुख सुवास नेम्वाङले आफूले प्रक्रियालाई बचाएर अघि बढ्न आग्रह गरे पनि दिनभर मेहनत पश्चात् निष्फल रहेको बताए।
विघटित संविधान सभाका सभामुख सुवास नेम्वाङ- मलाई देश भरी द्वन्द्वमा फँस्ने हो कि भन्ने चिन्ता भएको छ। धैर्य र संयमका साथ छलफल गर्नुस्। निर्वाचनको घोषणा गर्नासाथ दलहरुबीच विवाद भएको देखिएको छ। दलहरुलाई मिलेर जान आग्रह।
विघटित संविधान सभाका सभामुख सुवास नेम्वाङ- अप्ठेरो अवस्थामा पुगिसकेको छ। यो अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारे दलहरुले विवाद हैन छलफल गर्नुपर्छ। मुलुक अप्ठेरोमा पर्‍यो भने त्यसले सबैलाई अप्ठेरोमा पार्छ। दलहरु सब एक ठाउँमा उभिनु पर्छ।
विघटित संविधान सभाका सभामुख सुवास नेम्वाङ- जननिर्वाचित संस्था विघटित भएको अवस्थामा मुलुक अप्ठेरोमा नफँसोस् भन्ने चिन्ता लागेको छ।
हवस् त योसँगै आजको हाम्रो लाइभ अपडेट यहीँ टुङ्ग्याउँदैछौँ। कृष्ण ढुंगाना, मदन चौधरी र उमेश श्रेष्ठलाई विदा दिनुस्। नमस्ते !